Oslo kurwiswa kwehugandanga: Mupurisa akuvara, murwi ane zvombo akaurayiwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Norway Kuputsa Nhau » Oslo kurwiswa kwehugandanga: Mupurisa akuvara, murwi ane zvombo akaurayiwa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • Norway Kuputsa Nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Oslo kurwiswa nebanga: Mupurisa akuvara, murwi akaurayiwa.
Hazvisati zvazivikanwa kuti chinangwa chemufungiri chaiva chei, kunyange zvazvo, maererano nezvapupu zvakaona, murume wacho akashevedzera kuti “Allahu Akbar” (Mwari mukuru) panguva yekurwisa.
Murume asina hembe anorwisa vagari veOslo nebanga hombe achishevedzera "Allahu Akbar".
Mhondi yakanetsana nemupurisa mumotokari ichibva yapfurwa nemumwe mupurisa.
Murwi akapenga anonzi akasvika kuNorway achibva kumaodzanyemba kweRussia mudunhu reChechnya.
Oslo mupurisa akakuvara apo mumwe murume asina hembe, airatidza banga hombe, akarwisa vagari veguta guru reNorway masikati machena, asati apfurwa nekuurayiwa nevemutemo.
Mifananidzo nemapikicha akagovaniswa pamhepo anoratidza mota yevemutemo ichirovera murume asina hembe muguta guru reNorway achisimudza banga uye anonzi aityisidzira vaipfuura.
Mushure mekukandwa kumashure nemotokari yemapurisa, banga rakakwanisa kusimuka ndokuvhura gonhi remotokari yemapurisa. Panguva iyoyo, akaita sekunge ari kunetsana nemupurisa akagara pasati pabuda mumwe wake aine pfuti, achipfura mhondi.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa nemapurisa ekuNorway, Torgeir Brenden, akati murume uyu aigadzirira kubaya mumwe munhu paakarohwa nemotokari yemapurisa. "Akanga ave kuda kurwisa vanhu mumugwagwa pakauya mapurisa achibva amisa," akadaro Brenden.
“Vanhu vaviri vaibatanidzwa, uye mapurisa akavatarisira nepavaigona napo,” mukuru wemapurisa akadaro pasina kudonongodza. Zvinonzwisisika kuti mupurisa akakuvara asi kwete zvakanyanya. Brenden akataura kuti hapana mumwe munhu akakuvara asi akawedzera "tinogona kufungidzira kuti aida kurwisa zvakanyanya."
Mapurisa akasimbisa kuti chiitiko ichi chakaitika kuma 9am nguva yemuno muBislett chikamu che Oslo. Mamiriro emushungu uyu haasati asimbiswa kunyange hazvo mamwe mashoko ari kuti akafira panzvimbo iyi.
Sekureva kwenhau dzekuNorway, mhondi iyi yakabatwa nemhosva muna Zvita 2020 yekurova imwe pfuti isina kupfeka musi waChikumi 4, 2019. Murwi uyu, uyo anonzi akashevedzera kuti 'Allahu akbar' panguva yekurwiswa kwa2019, akashamiswa nepfuti yemapurisa achibva asungwa. Akatongerwa kumanikidzirwa kutarisira utano hwepfungwa uye faindi. Murume wacho akakurira muruwa rweRussia rwekumaodzanyemba kweChechnya.
Kurwiswa uku kunouya mushure mechiitiko muCannes, Furanzi neMuvhuro, apo mumwe murume akanga akabata banga akavhura gonhi remotokari yemapurisa ndokurwisa mumwe wemapurisa matatu aivamo. Murume webanga, uyo anonzi akataura chimwe chinhu nezve“muporofita,” akapfurwa nomumwe wavamwe vakuru vakuru. Mumwe mupurisa akakuvara.
Muna October, mumwe muMuslim akatendeuka akauraya vanhu vashanu muuta nomuseve mutaundi rokuNorway reKongsberg.